I-Semalt Expert ivelisa kwi-Intanethi ye-Free Web Scraper Tools
Ukucoca okanye ukukrapha umxholo kumaphepha ewebhu ahlukeneyo kumashishini asekhompyutheni kunye nabaphuhlisi bewebhu. Nangona ikhupha amakhulu ukuya kumawaka enkxaso yesicelo, kungenakwenzeka ukuba ukhethe i-software engcono ye-scraping software. Kodwa ke kufuneka uzame ukufumana isona esona sichanekileyo nesona sisisigxina esiza kusindisa ixesha kunye nemali yakho - built in wardrobe mirror doors.
Lapha sinoluhlu lwezona zixhobo ezidumileyo ze-web scraping.
Iphuhliswe ngu-Ipswitch Inc. kwaye isandiso kwiibhenqa zewebhu ezahlukeneyo. I-iMacros iyakongeza kalula irekhodi, iphinde ibuyise kwakhona imisebenzi kwaye isenze sithatha imisebenzi yewebhu njengokulayisha, ukulandwa, ukuvavanywa kwezithombe kunye neetekisi. Ngaphezu koko, kunceda ukungenisa nokuthumela idatha okanye iifayile kwi-web apps usebenzisa iifayile ze-XML, PHP kunye ne-CSV. Emva koko usindise idatha eyiluncedo kuthi kwisiseko sawo okanye enye imithombo ecacileyo. Le nkqubo inika iinkcukacha zendawo yokukhutshwa kwedatha kwaye sinceda kwimisebenzi yokuhlola i-web.
Iphuhliswe kwaye iqaliswe ngu-Import.io Corporation. Ngenisa..Io yenye yezona zinto zihamba phambili kwaye zidumileyo kwiinkqubo ze-web scraping kwi-intanethi. Kufezekileyo kubo bobabini kunye namashishini kwaye bavumela abasebenzisi ukuguqula amaphepha ewebhu kuma-API kunye neefowuni ezimbalwa. Ngaphezu koko, ukungenisa i-import.io kwenza kube lula kubaphuhlisi bewebhu kunye nabacwangcisi ukukrazula idatha kwiwebhusayithi efunwayo. Ubuchwephesha balo obuyingqayizivele buvumela abasebenzisi ukugcina idatha kwiifom ezichaziweyo ngaphandle kweengxaki.
I-Scrape ibhokisi elisebenzisekayo nelinenkululeko ye-SEO elisetyenziswe ngabazi-freelancers, abaphuhlisi kunye neenkampani ze-SEO emhlabeni jikelele. Inceda ukutshekisha iiwebhusayithi kunye neeblogi ngaphandle kokuphuma, kwaye iimpawu zayo eziphambili ngabavuni be-injini yokukhangela, abavuni begama elingundoqo, abavuni beeproxy, ii-posters posters, kunye ne-checkers checkers. Ezinye zeendlela ezikhethiweyo zikhethi zekhasi lokukhangela, ukudala izibonelelo ze-RSS, ukukhupha i-imeyile, ukufumana isizinda esingabhalwanga kunye nabanye. I-Scrapebox inokusebenza njenge-SEO yakho yangasese kwaye iza kuyenza imisebenzi yakho ngokufanelekileyo ukusuka kwii-URL zokuvuna. Kuya kuqhuba uphando, kukhupha izixhumanisi, zenze uphicotho-zincwadi kwaye zenze izinto ezininzi kuwe ngaphandle kweentlawulo.
I-scraping enye yeyona ndlela iphambili ye-scraping programs. Oku kusebenza njengesikhokelo sokukhawuleza sewebhu esheshayo nesiphezulu kwaye sisetyenziselwa ukukhupha idatha ehleliweyo neyiyo. Ingasetyenziselwa ukucwangcisa ulwazi, ukuchitshilwa kwedatha, nokudala imithombo yolondolozo lwembali. I-Scrappy iyaziwa ngenkxaso yayo eyakhelwe kuyo kwaye inokunceda ukukhipha idatha kwimithombo ye-HTML kunye ne-XML. Ukongezelela, inkxaso yayo yokwandisa ivumela ukuba sixhumeke kwiimisebenzi zethu ngokusebenzisa izibonakaliso ezithile kunye nama-APIs achaziweyo kakuhle.
Le nkqubo iphuhliswa kwaye ithengiswa nguMozenda Inc. ukuba sibambe umxholo kwiindawo ezininzi. Iququzelela idatha eqokelelweyo kwaye iyahlula kwiindidi ezahlukeneyo ngokusekelwe kwiimfuno zethu kunye nokulindela. Idatha yolondolozo lwefu leli thuluzi ligcina iifayile zethu zigcinwe kubasebenzisi be-intanethi nabangaphandle. Kuchanekile kwaye kulula ukuyisebenzisa inkqubo ehambisana nokugcinwa okuphantsi, uthembisa ukuchaneka kwedatha, kusenza sigxininise kwii-analytics, kwaye inike iinketho zokushicilela ezifanelekileyo kwaye ezinokuthenjwa. Iifayile ezikhishiwe ziza kwifom efana ne-CSV, i-Txt, i-XLS kunye nabanye.